Kuboshwe ozale usana walulahla - Ilanga News
Home Izindaba Kuboshwe ozale usana walulahla
Kuboshwe ozale usana walulahla
Kubonakale ngezinja zakomakhelwane sezibangisana ngezicubu zalo
ZIMKHALELE owesifazane waseNkundusi, eMtubatuba, osolwa ngokuzala inga-ne maqede wayiklinya wa-yibulala, wayoyilahla ehlathini eliphakathi kwemizi ngoLwesine olwedlule.
ILANGA lithole ukuthi lona we-sifazane oneminyaka engu-24 ubudala (igama lakhe esiligodlile aze asho noma uyalivuma icala), kuthiwa ugila lo mkhuba nje, uvele une-nye ingane, kanti kusolwa ukuthi uzalele endlini yangasese, emuva kwalokho wabe eseyibulala ingane wayoyilahla ehlathini.
Kuthiwa kubonakale izinja za-komunye umuzi zihlangene ngamakhanda esangweni, kucaca ukuthi kukhona ezikudlayo, futhi zala ukhasha uma kukhona okusondelayo.
Umama wakulo muzi uzidelile wasondela, okuyilapho ebone enye yazo iphethe umlenze ezinye ziyijaha, ziyibangisa. Kubizwe bo-nke abantu naye umsolwa, kodwa wangaveza ukuthi kukhona akwaziyo, ubebonakala ekhululekile.
Kubikelwe induna yendawo, uMnu Siphilangenkosi Mantengu, eyenze uphenyo oluholele ekutheni kutholakale umsolwa.
Ekhuluma naleli phephandaba uMnu Mantengu, uthe uyoyixoxela amagwababa echobana into ayibo-nile.
“Ngizibonele ngawami izicubu zengane sezihlukene. Ngiqale nga-leso sikhathi ukwenza uphenyo.
“Omunye umama uthe akukho akwaziyo ngaphandle kokuthi enye yamadodakazi akhe uyibone iwasha izimpahla zayo ebezigcwe-le igazi, okuthe uma eyibuza, ya-mtshela ukuthi iyopha, ibiqeda ukuphuza amaphilisi okuhlanza igazi emzimbeni.
“Ngiyalele ukuba kulandwe amadodakazi akhe lo mama.
“Umsolwa ufike wathi ingane ngeyakhe, akazi ukuthi wayikhuleliswa ngubani.
“Ngiqhubekile nemibuzo, wagcina esesitshela ukuthi wayekade ephuma esikoleni ngezithuba za-kusihlwa wavukelwa ngumuntu wamdlwengula.
“Uthi ngaleso sikhathi wezwa ukuthi lo muntu umkhulelisile, kodwa wangabikela muntu. Kungi-zwise ubuhlungu ngoba le ntombazane kayikhombisi ngisho nokuzi-sola nje ngesenzo sayo,” kusho uMnu Mantengu.
Uthi akuqaphelile wukuthi izicubu eziningi zengane besezi-ngasekho.
“Namanje kayikhulumeki into engiyibonile laphaya, ikhanda beselihlukene nomzimba, umlenze owodwa uthathwe yizinja, isinqe esisodwa sidliwe.
“Ibuhlungu into eyenziwe yilo muntu, uphoxe abazali bakhe,” kusho yena.
UNkz Zanele Gumede oyilungu lomphakathi, ukhale kakhulu ngo-kufika kwenduna yendawo nangesenzo sayo sokubiza amaphoyisa.
“Izinkinga zololu hlobo kazidi-ngi ukulungiswa ngamaphoyisa nezinduna, kudingeka thina singa-bafazi sithathe isigilamkhuba sehlele naso emhosheni siyokhuluma izindaba zethu singabesifazane.
“Lona nje bekufanele athole induku, ulihlaze waliqeda igama labesifazane balapha endaweni.
“Nezinsizwa zakwezinye izigodi ngeke zisaqomisa nasezinganeni zethu ngoba sezizothathwa njenga-babulali bezingane. Uhulumeni unezinhlelo eziningi kakhulu zo-kugwema ukukhulelwa okungenasidingo futhi kumahhala.
“Uma kwenzekile wakhulelwa ngephutha, uhulumeni uyayondla leyo ngane,” kusho uNkz Gumede.
ILANGA lixhumane nonina ka-msolwa, esinqume ukuligodla igama lakhe, othe kumphathe kabi okwenziwe yindodakazi yakhe.
“Bengingazi nokuthi ukhulelwe lo mntwana, ngimbone ewasha izimpahla zigcwele igazi. Ngimbu-zile ukuthi ngelani leli gazi wathi uyopha, uphuze amaphilisi oku-hlanza igazi. Okuningi ningakubuza kuyena ngoba mina benginge-nankinga nokumitha kwakhe.
“Ngiphatheke kabi ngale nto ayenzile. Lo muntu uvele unenga-ne, okusho ukuthi uvele uyawazi umhelo futhi uyazazi noma ekhu-lelwe, njengoba esesitshela ukuthi ubengazi ukuthi ukhulelwe.
“Uthi uzwe efikelwa wumuzwa wokuya endlini yangasese, okuyi-lapho afike kwaphuma umchamo maqede kwalandela ingane,” kusho inina.
Okhulumela amaphoyisa Kwa-Zulu-Natal, uColonel Thembeka Mbhele, uthe kuboshwe owesifaza-ne mayelana nalolu daba wavela kafushane eNkantolo yeMantshi yaseMtubatuba.
“Kutholakale izicubu zesidu-mbu sengane esanda kuzalwa eNkundusi, kanti owesifazane (24), uboshiwe wavela kafushane enka-ntolo ngoMsombuluko,” kusho uCol Mbhele.
Previous article‘IChiefs mayixolise inhliziyo ngeCaf’
Next articleIngene enkantolo ibakaza inhlalisuthi esolwa ngokubulala umkayo ngesihluku